19 janoary – 19 jona : Dimy volana izao ny fitondrana Rajoelina
jeudi, 20 juin 2019 11:34
Isany nanamarika ny dimy volana nitondran’ny filoha Andry Rajoelina ny « vary mora », nampakarana ho 200.000 Ariary ny karama farany ambany. Teo koa ny namoahana didy hitsivolana nampihenana ho 18 ny isan’ny Senatera raha 63 izy amin’izao fotoana izao.
Maromaro ny fanapahan-kevitra noraisin’izao fitondrana izao, toy ny nanesorana, efa telo volana laza izao, ireo Lehiben’ny Faritra rehetra miisa 22 nanerana ny Nosy ary tsy mbola misy voasolo hatramin’izao. Nesorina amin’ny toerana efa telo volana ihany koa izay ary tsy mbola voatendry hatramin’izao ny Tale jeneralin’ny Cnaps.
Toy izany ihany koa ireo masoivoho malagasy maro maneran-tany izay nesorina fa mbola tsy misy solony. Ary ireo talé jeneraly maro isan'ambaratonga fa mbola miandry izay mpandimby azy.
Nanapa-kevitra ny hanadio ny mpiasam-panjakana izao fanjakana izao, ary anisany fanapahan-kevitra noraisina tato anatin’izay dimy volana izay ny hanesorana ireo mpiasa nanana sata ECD (Emploi de Courte Durée), ireto farany dia mitaraina fa efa enim-bolana izao tsy nandray valin-katsembohana. Toa ireo mpampianatra FRAM amanaliny maro ihany koa.
Nanao tohivakana ny fampidirana am-ponja, mpandraharaha, mpanao politika, eny hatramin’ny mpitandro ny filaminana ihany koa aza.
Teo ny fividianana ny helikoptera, fiaramanidina ary fiara ho fampitaovana ny mpitandro ny filaminana. Nisy koa ny famitana ny fanamboarana fotodrafitrasa toy ny EPP Tsiry sy ny Kianja manarapenitra ao Toamasina. Ny fanamafisana ny fanohizana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-5A Ambilobe-Vohémar, sy lalam-baovao « Voie Rapide » mampifandray ny seranantsambon’i Toamasina amin’ny lalam-pirenena faha-2 hizoran’ny fiara vaventy mpitondra entana.
Tao anatin’iny dimy volana nitondrany iny no nanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka niteraka resabe, izay raha ny vokatra feno vonjimaika navoakan’ny CENI dia nahazoan’ny vovonana « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » toerana 80 mahery ao amin’ny Antenimieram-pirenena.
Efa in-dimy nivoaka tany ivelany (Addis Abeba-Ethiopie, Maurice, Nairobi Kenya, Sénégal, France) ny filoha tao anatin’izay dimy volana nitondrany an’i Madagasikara izay.